We She Me: ကာမသုခ ချို့တဲ့သူများ
| FLAGS: Myanmar , Others
Anonymous - 8/22/08, 9:39 PM
As u know this 1 is like open but secret.
yes i agree it. so many near by me.
i think u'll write part 2.
Anonymous - 8/22/08, 11:11 PM
ဗဟုသုတရပါတယ် ကိုအန်ဒီ၊ ဖတ်ရတဲ့သူတွေလဲဆင်ခြင်ရတာပေါ့။ အားပေးနေပါတယ်။ လောကကြီးကမလွယ်ပါလားနော်..........
mtj - 8/23/08, 12:54 AM
ကိုandy အပိုင်း ၂ ကို ဆက်ရေးသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ ကူညီအဖြေရှာပေးတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖတ်ချင်ပါတယ်။
Anonymous - 8/23/08, 1:45 AM
Ko Andy, this looks like one of ur most thought-provoking posts :)
Anonymous - 8/23/08, 8:50 AM
waiting Part II...
Aung Myo Htet - 8/23/08, 11:57 AM
မင်းကထင်တာပါ၊ တချို့ လက်မထပ်ပဲ အတူနေသူတွေက မင်းတို့ငါတို့လို အိမ်ထောင်သည်တွေကိုတောင် ချို့တဲ့သူတွေလို့ ပြောကြဦးမယ်။
Anonymous - 8/23/08, 12:46 PM
very good article, also effect to our country poulation with good health. Very sad circumstances....
Anonymous - 8/23/08, 1:08 PM
ရည်းစားတောင် မထားရဲဘူး။ ရည်းစား ထားလိုက်ရင် အိမ်ထောင်ပြုရမှာ စိုးလို့။ စက်ပစ္စည်းတွေလို ခဏဖြုတ် (သံချေးမတက်အောင်) အမည်းဆီ သုတ်ပြီး သိမ်းထားလို့ ရရင်ကောင်းမယ်။ ဟိဟိ….. ကျွန်တော့် လှောင်တာလား
စိုးထက် - Soe Htet ! - 8/23/08, 5:16 PM
ဟုတ်ပါတယ် နောက် ဆုံးအပိုဒ် ... ကိုယ့် မိသားစု မပါအောင် ကြိုးစားတည်ဆောက် နေရတယ် ... တစ်နေ့ ဖုန်း ၃ ခါလောက် ဆက် ၂ နာရီ လောက် ချက်နေ ရတယ် ... :P
Andy Myint - 8/23/08, 10:07 PM
Well said, Ko Naing . It's open but secret.
လောကကြီးက မတရားဘူး စာဖတ်သူ ဟီးဟီး ဘာမှတော့ မဆိုင်သလိုပဲ
တကယ်တော့ ကျွန်တော့်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီအတွက် အဖြေကို လိုချင်နေတာပါ MTJ ။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ဒီလို Suffer ဖြစ်နေတဲ့ အထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ အစ်ကို အရင်းတွေ အစ်မ အရင်းတွေပါ ပါနေလို့ပါ။ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ပုံစံနဲ့တော့ ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
Many thanks, Gyit :) Couldnt be happier...
Dear reader , Part II was censored by board of editors :) Just kidding
အေးပေါ့ အောင်မျိုးထက် ။ သူတို့တွေက ငါတို့လို သားသမီးအပူ ဘာအပူ ညာအပူ မရှိဘူးဆိုပြီး ပျော်နေမှာပေါ့။ ဘိုတွေ ဆိုရင်တော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဗမာတွေ ဆိုရင်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်လို နေမယ် မသိ။
Thanks, Reader . I dont think it will have major impact on population. Because this happens only in urban area and the incident is reverse in rural ones. Marriage or sex is quite common among youngsters in rural areas. That's only my opinion from experience. I dont have any statistic though.
တိုက်ဆိုင်မှု ရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပါ စာဖတ်သူ .. ဟီးဟီး
မပူနဲ့ဗျို့ကိုစိုးထက်ကြီးတို့က ဒီအုပ်စုထဲမှာ မပါဘူး။ ဖြတ်လိုက်တဲ့ တစ်ပိုဒ်ကို ပြန်တင်ပေးလိုက်မယ်။
တချို့က နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ် လာလုပ်တာ မဟုတ်ပေမယ့် အစိုးရ ကိစ္စနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ပညာတော်သင်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် လင်မယား ၁ နှစ်တန်သည် ၂နှစ်တန်သည် ခဏခွဲလာရတာ ရှိမယ်။ သူတို့ကတော့ ချို့တဲ့သူတွေ ချို့ယွင်းသူတွေ မဟုတ်ဘဲ ချွင်းချက်ထဲမှာပဲ ပါပါတယ်။ .........
Anonymous - 8/23/08, 11:02 PM
တစ်ချို့ကြတော့ တော်တော်ကံကောင်းကြပါတယ်။ နိုင်ငံခြားအလုပ်လုပ်တော့လည်း တစ်နိုင်ငံတည်း၊ ရန်ကုန်ရုံးအလုပ်လုပ်တော့လည်း တစ်ရုံးတည်း။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့လည်း စင်္ကာပူသွားလည်းအတူတူ၊ စင်္ကာပူကနေသြော်ဇီကို ကူးလည်းမိသားစုအတူတူသွားကြ။ အဲလိုကံကောင်းတဲ့လူတွေရှိတတ်တယ်လို့ပြောတာပါ။ ဘယ်သူ့ ဘယ်သူကိုမှ မရည်ရွယ်ပါ။
ဝေတိုး - 8/24/08, 12:42 AM
Ha Ha...you make your usual femal fans uncomfortable to comment. No wonder there are more anonymous comments.
Not having sexual pleasure for Burmese singles impacts on social problems. As my friend in pharma products distribution business in Myanmar said, in all kinds of drug they imported, Viagara like drugs are the most demanding. According to their survey, most customers are between age 18 and 29. I think we all know reason. As you said in your post, when they try to have it (in any ways - with partner or whoever),they have to spend on place, meal, and ...etc. So they use the pills.
I am so sad for hearing that bitter truth. I used to work with UN's birth spacing project in my teen. Whenever I tried to educate some of my female friends what I'd learnt, they treated me like I was doing something shamful. In burmese society, Sex talk is something not to talk out. I appreciate your courage to post the topic. Ways to go.
bOASTER - 8/24/08, 1:09 AM
khin oo may - 8/24/08, 10:14 AM
ယောက်ကျား ဖြစ် သူ က မိမိ ၏ ဇနီး အား ဘာကြောင်.ဖောက်ပြန် ရခြင်း အကြောင်းရင်း ကို စစ်ဆေး မေးမြန်းရာ ဇနီး ဖြစ် သူ က ပြန် လည် ရှင်းပြ၏။
လူ တယောက် က ဆင်းရဲ လွန်း ရွေ. ထမင်း မစား ရသေးကြောင်း ပြော ရာ သနား သဖြင်. ထမင်း ဟင်း ကျွေး လိုက် ကြောင်း။ ထို သူ က ကျေး ဇူး တင် စကား ပြော ပြီး သကာလ. ထပ်ပြီး တောင်းဆိုကြောင်း။ ယောက် ကျား အသုံး မပြူ သော ပစည်း များ ရှိ ပါ က သူ. ကို ပေးရန်. ဆိုကြောင်း။
ထို အခါ မိမိ၏ ခနွာ ကိုယ် ကို ယောက် ကျား အသုံး မပြူ သည် မှာ ကြာ ပြီ ဖြစ်ရွေ. ပေး လိုက် မိကြောင်း မျက် ရည် လည် ရွဲ ဖြင်.ရှင်းပါ သည်.။
Andy Myint - 8/24/08, 3:14 PM
ကံကောင်းတဲ့ သူတွေက ကံမကောင်းတဲ့ သူတွေကို ကူညီရင် ကောင်းမယ်နော် ND။
Thanks, Ma Wai Toe. You said it enough.
Dont get me wrong, bOASTER. I might look like on the fortunate side ofacoin. But, in fact, I'm highlighting in favour of the other side. Hope you understand.
မခင်ဦးမေတို့ကတော့လေ... ရယ်နေရတယ် ဟီးဟီး
chaos - 8/24/08, 3:14 PM
မျိုးဝင်းဇော် - 8/24/08, 7:15 PM
နောက်တာလား ကိုအန်ဒီ ဒီမှာတစ်ယောက်ထဲတောင်ချာလပတ်ရမ်းနေလို့ အသက်လေး ၃၀ ကျော် ၄နှစ်စွန်းလေးရှိသေးတယ် အားမပေးတဲ့အပြင် ငိုချင်အောင်လုပ်နေတယ် ဟားဟား
ကျော်မင်းနိုင် - 8/25/08, 2:35 AM
တည့်တိုးပဲတွေး ပြီး ....
တည့် တိုး ပဲ ရေးထားတာဆိုတော့ .
တည့်တိုးပဲ ကော့မင့် ၀င်ပေးသွားတယ်။
" မိုက်တယ်" ကွာ "ကြိုက်တယ်"
Ko Paw - 8/25/08, 10:56 AM
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟာ မျိုးဆက်ပြန့်ပွားရေးကို ထိခိုက်နေပါပြီ။ ကယ်ကြပါ…..း-)
Andy Myint - 8/25/08, 8:35 PM
ဟုတ်တယ် ရယ်ရတယ် chaos
ဘာမှ စိတ်ဓါတ်မကျနဲ့ ကိုမျိုးဝင်းဇော် ဒွေးချိုး လေးတိုး တဲ့ ၂၁ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးသာ ရှာယူ။
မိုက်တယ်.. မိုက်တယ် ကျော်မင်းနိုင်
You got the point Ko Paw....
နုသွဲ့ - 8/25/08, 9:18 PM
ဒီလို လူတကာ မပြောရဲတဲ့၊ တကယ်လည်း ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စကို ကိုအင်ဒီလို နာမည်၊သြဇာ ရှိသူက ညင်ညင်သာသာလေး ချရေးလိုက်တာ အင်မတန် ကောင်းပါတယ်။ လေးစားပါတယ်။
ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဘာတွေဘ၀င်မကျ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေသူတွေ စဉ်းစားစရာ ရတာပေါ့။ Sexually frustrated ဖြစ်နေတာပဲ-ဆိုတာ နားလည်လာရင် ဆင်ခြင်ပြောင်းလဲနိုင်တာ (ဥပမာ အလကားနေရင်း ဘုကျနေတဲ့ အကျင့်မျိုး) ဆင်ခြင်ပြောင်းလဲတာတို့၊ မှန်ကန်တဲ့ ထွက်ပေါက် (ဥပမာ အားကစားတစ်မျိုးမျိုး) ရှာတာတို့ လုပ်နိုင်တယ်လေ။
ဒါဟာ အခြေခံ လိုအပ်ချက် (Basic Need) တစ်ခုပေမယ့် တစ်ချို့က နေနိုင်ကြတယ်။ ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ချောကလက် မစားဘူးတဲ့ကလေး ချောကလက်ကို ကြိုက်ရကောင်းမှန်း မသိပဲ သူ့ဖာသာသူ စိတ်ချမ်းသာနေရင်လည်း ကောင်းတာပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ ချောကလက်က အမြဲရနိုင်တဲ့ အရာ မဟုတ်ရင် ပြောပါတယ်။
ကျမ အထင်နဲ့အမြင်ကို ပြောတာပါ။ Evidence-based တော့ မဟုတ်ဘူးရယ်။
Andy Myint - 8/25/08, 11:45 PM
ကျွန်တော် ရေးထားတာကလည်း Evidence based လည်းမမည် Reference based လည်း မမည်ပါဘူး။ ဆွေမျိုး Based ပေါ့။ ကိုယ့်အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ မြင်နေရတာကို ရေးလိုက်တာပါ။ ၀ိတ်နဲ့ ဖိတယ်ဆိုရအောင် လူက ဖလံပါ :-) မနုသွဲ့တို့လိုကတော့ သီအိုရီ ကျကျ သိမှာပါ။
Nu Thwe - 8/26/08, 3:13 AM
1. You are just being modest, Ko Andy. Very wise of you! I meant what I said anyway.
2. ကျမရဲ့ ထပ်ဆင့်အထူးပြု ဘာသာရပ် (Sub-specialty) မဟုတ်လို့ ယေဘူယျသဘောထက် ပိုပြီး မဆွေးနွေးနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ :)
TNN - 8/26/08, 5:25 AM
ယခုလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နဲ့ လူတကာ မပြောရဲတဲ့၊၊ တကယ်လည်း အမှန်တကယ် ဖြစ်နေတဲ့ (မြန်မာပြည်တွင်း)လူမူရေးကိစ္စ တခုကို လူငယ်၊ လူ ကြီး၊ အားလုံး နားလည် လွှယ်အောင် ညင်ညင်သာသာလေး ချရေးလိုက်တာ အင်မတန် ကောင်း ပါတယ်။ မျိုးဆက်ပြန့်ပွားရေး နဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ မိသားစုဘ၀တွေကိုဘယ်သူတွေဖျက်စီးနေပါလိမ့်။ လေးစားလျှက်။
သန်းနိုင် (ခေတ်တ ယူအေအီး)
TNN - 8/26/08, 5:42 AM
တကယ်တော့ မြန်မာပြည်သူ/သား တွေဟာ ကာမသုခ တင်မဟုတ်ပါဘူး စိတ္တ္တသုခ၊ ကာယသုခ၊ ချမ်းသာချင်းသုခ...ဟိုသုခ..ဒီသုခ...သုခပေါင်းစုံချို့ တဲ့ပြီး...ဒုက္ခပေါင်းစုံနဲ့၊ နှစ်ပါးသွားနေရတာ၊ ကြာလပါပေါ့.............
ပီတိ - 8/27/08, 2:02 AM
ကိုအန်ဒီ ချဉ်းကပ်ရေးသားပုံကို ကြိုက်ပါသည်။ ဆွေးနွေးဖို့ရာ အဆင့်မမှီလို့ ပြောစရာမရှိပါ...
Andy Myint - 8/27/08, 1:08 PM
ဟုတ်ပါတယ် TNN ။ မြန်မာပြည်သားတွေ ခမျာ သုခအပေါင်း ယိုယွင်း ချို့တဲ့နေတာ အတော် သနားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ဒီအထဲမှာ ကိုယ့် မိသားစုလည်း ပါနေတာပါ။
အဲဂလိုကြီးတော့ မလုပ်ပါနဲ့ ကိုပီတိရယ် :) နွေးနွေးထွေးထွေး ဆွေးနွေးပေါ့။ တကယ်တော့ ကျွန်တော် “တည့်” သာ ရေးချလိုက်တာပါ။ ဘာ တက်ကနီကွေးမှ မသုံးထားပါဘူး။
အညာသား - 9/22/08, 9:40 AM
ဖတ်လို့ကောင်းသလို မှတ်သားစရာတွေလဲ ရလိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။
Andy Myint - 9/22/08, 10:06 PM
Anonymous - 3/4/09, 12:29 PM
ိကျွှန်ေ်တ်ာလည်း ယူအေအီးမှာရောက်နေ တာ ၄ နှစ်လောက်ရှိပြီဗျာ ...ဒိမှာလည်း အစ်ကိုပြောတဲ့ အတိုင်းဘဲ လူမူရေးအခြေအနေ က သိပ် ပြိးတော့ ဘ၀င်ကျ စရာမကောင်းဘူး...ပို ဆိုးတာက မိန်းကလေးတွေက အတော် စောင့်ထိမ်းနိုင်မှူအားနည်းတာတွေ့ရတယ် အထူးသဖြင့် ၂၇ နှစ်က နေ ၃၅။ ၄၃ နှစ် အပိုင်းခြားတွေ ..
ဒိထက်ပိုဆိုးတာက သူ က ဘုရားတရားကို တော့အတော် လေးလုပ် ကြပါ တယ် ဒါ ပေမယ့် သူ တို့ နဲ့လက်မထပ်ဘဲအတူနေ ကြတူတွေ ဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံသား ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီးအိမ်ထောင် တွေ ရှိနေ ကြတာဘဲ ဗျာ...အဲဒါ ကို သိရဲ့နဲ့ ဒီမိန်းကလေးတွေကိုယ်တိုင်က ....ပြောရ ရင် တော့ နင် မရလို့မို့လားလို့ပြောခံ ရသေးတယ် .....ကျွှန်တော် ဒီလောက်ဒိတော့အမြင် မကျည်းပါ ဘူး လူလွှတ်တွေ အများကြိးပါဗျာ ရုပ်စွ ဆုံး တခြားလူမျိူးခြားတွေ ရှိပါတယ် မနေ နိင်ရင်တောင်ပေါ့ ......အခုတော့ သူတို့ က မနက်ဘုရားရှိခိုး ည ကျ သူများယောက်ျားနဲ့အိပ် ကောင်းရော .... ပိုဆိုးတာက ကိုယ့် သူငယ်ချင်းကိုတောင် အိမ်ထောင်၇ှိကောင်လေးတွေနဲ့ အောင်သွယ်ပေးကြတယ်ဆိုတော့......ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှူ ကိုယ့်ဘာသာကို ကိုယ့်ဟာကိုဖျက်ဆီးနေ ကြသလိုဖြစ်နေ ပြီဗျာ....
တေဇာ - 1/11/10, 8:38 AM
အတော် တွေးတတ်ရေးတတ်တာပဲ။ လက်တွေ့ခံစားနေရပေမဲ့ လူပြောသိပ်မများတဲ့ မျက်နှာစာပဲ။ တကယ်တော့ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတယ်ဗျ။ အဲလိုပြောပြန်တော့လည်း လူရယ်စရာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ရယ်တဲ့လူကလည်း စိတ်ထဲကျိတ် ၀မ်းနည်းနေမှာပဲ။ ၀ယ်မစား၊ ခိုးမစားဘဲ အရက် သုံးနှစ်လောက် သောက်လိုက်တယ်...။ မနည်းပြန် ရပ်ထားရတယ်...း)
ဒါပေမဲ့ အသက်က တတိတိနဲ့ ကြီးလာပြီ...။း(
Anonymous - 10/5/10, 3:54 PM
နိုင်ငံခြားရောက်နေတာတောင်မိဘ ကိုထောက်ပံ့နေရလို့ မယူရဲသေးဘူး
ကို့ထက် အဆင်ပြေတဲ့သူကို လှူရမလိုဖြစ်နေပြီးဗျို့။
Anonymous - 6/30/12, 12:03 PM
Anonymous - 8/15/12, 7:13 PM
မိန်းကလေး တွေလဲ SEX ကို ကြိုက်ကြတယ်နော်..တသက်လုံး ဘာမှ မဖြစ်သလို သိပ်မကြိုက်သလိုလေး ညာခဲ့ကြတာ နောက်တော့ အလိမ်ပေါ်တာ ပါပဲ
Anonymous - 8/15/12, 7:16 PM
မိန်းကလေးလဲ လူပဲ SEX ကိုကြိုက် တာပဲ
Anonymous - 1/16/13, 7:00 PM
ကလေးတွေ လက်လွတ်ရင် စာပြန်ရေးပါဦး ကိုအန်ဒီ.. အဟောင်းတွေပဲပြန်ဖတ်နေရတယ်.. အတွေးကောင်း အရေးကောင်းသူမို့ပါ.. ပတ်ဘလစ်ရှာနဲ့တွေ့ရင် ဆရာစိုးမင်းလို စာအုပ်ထွက်ချင်ထွက်လာမှာ..
Anonymous - 3/27/13, 8:55 PM
thanks for post, the best situation for myanmar people
naymin thuyain - 4/12/13, 10:47 AM
အခုချိန် အထိ လူထွက်ပေါက်
ကလေးတောင် ကိုင်ခွင့် မရခဲ့ပါဘူး။
ကံဆိုးတာက သူကလွဲရင် ဘယ်သူ့မှ
ချစ်လို့ မရတာဘဲ။တသက်လုံး ကံဆိုး
ချင်တော့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ သူက
My tay zar Lovemama - 4/17/14, 4:48 AM